China Intelligent Kudzora Jersey Calandra Roll Heat Press Machine fekitori uye vanotengesa | Asiaprint
1.Injereta Inobata Screen Screen
2. Rack Dhiraivhi: Deredza fume mukati mechassis, nguva refu yebasa.
4. Chinyorwa Choparadzanisa Chishandiso: Kana iri simba rekucheka, wedzera chengetedzo uye nyore dhizaini yemanyorero akanzwa kudzosera mudziyo kuchengetedza hupenyu hwebasa hwegumbeze.
5.Mhepo Shaft: Yekuunganidza yakashandiswa sublimation pepa, inogona kuchengetedza nguva uye nesimba.
6. Yekumhanyisa Kudzora Yuniti: mamwe mashandiro ekushandisa ekuchinjisa kudhinda kumhanya.
7. Teflon conveyer bhandi: kukurumidza kupisa kupisa uye kuona kushandura maitiro.
Chigadzirwa Muenzaniso JC-26B Calandra
Roller upamhi 1.8m
Roller dhayamita 800mm
Huremu hwese (KG) 3000kg
Kukura kwepacking 3000 * 1770 * 1770cm
Chinja kumhanya 6 m / min
Kushanda Tafura Kusanganisira
1. Anopfuura makore makumi maviri 'chiitiko
Asiaprint inonyanya kuita sublimation uye yekudhinda ndima kweanopfuura makore makumi maviri.Nehunhu hwakagadzikana uye hwakakomba hunhu hwebhizinesi, isu tatova nevatengi / vagoveri kupfuura nyika makumi mashanu.
2. OEM / ODM sevhisi
Isu takaita michina yeOEM / ODM kune mazhinji anozivikanwa eUS, Germany neUK michina yemhando.
3. Kurumidza kupindura
Pindura kubvunzana uye nenyaya mumaawa makumi maviri nemana ekushanda.
4. Professional timu yekutengesa
Imwe-yekumira masevhisi e-sublimation printer, muchina wekudziya, sublimation bepa uye sublimation inki, sublimation blanks, nezvimwe.
6. Yakakwira mhando & mutengo wepakati
Muchina wega wega unozoedzwa usati wasvitswa kuti uchengetedze hunhu hwakatsiga.
7. Small MOQ rutsigiro
Mazhinji zvigadzirwa zvedu zvisina MOQ kukumbira kutsigira.
8. Kukurumidza kusvika
Pashure: 1.7m Hupamhi Kendendende Fabric Heat Transfer Transfer Machine
Zvadaro: 3.2m Calandra Roller Heat Press Machine
Yakakura Fomati otomatiki Mucheka Fusing Machine
High Pressure Hydraulic Double Worktable Heat P ...